Pane chishuwo chakasimba chekupa maSNF nezvimwe zviwanikwa, kwete chete maererano nemidziyo yekuzvidzivirira, asiwo yakakosha hutachiona hwekudzivirira zviwanikwa uye vashandi.
Kubva kutanga kwechirwere cheSARS-CoV-2 / COVID-19 muUnited States, isu takazivikanwa zvakanyanya kutambura kwevamwe varwere. Pakutanga, nzvimbo dzekuyamwisa dzine hunyanzvi uye dzimwe nzvimbo dzekuchengetedza kwenguva refu dzakatanga kuratidza mukana wekutapukira kwehutachiona hutachiona.
Kubva pakushomeka kwehutachiona hwekudzivirira zviwanikwa kune vanotambura varwere uye kazhinji vashandi vakatwasuka, nharaunda idzi dzakaratidza kuvimbisa kwechirwere kuti chibate. Kunyange isu tichiziva kuti ino ingave isina kusimba nzvimbo, vangani vakatapukirwa zvechokwadi? Mumazuva ekutanga ekuputika, kuyedzwa kwaingoitwa kune avo vane zviratidzo, asi sezvo zviwanikwa zvawanda, saka kuwanika kwekuyedza. Chidzidzo chitsva kubva kuCentre for Disease Control and Prevention's Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) chakaongorora kuwanda kwe COVID-19 muDetroit hunyanzvi hwevanamukoti (SNFs) kubva munaKurume kusvika Chivabvu wegore rino.
Vachishandisa poresi yekuwandisa kwehuwandu hwevashandi umo vashandi vese nevagari vakaedzwa zvisinei nezviratidzo, vakawana huwandu hunoshungurudza mukati memakumi maviri nematanhatu eDNetroit's SNFs. Kuedzwa kwakaitika munzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekutanga uye kwakaitwa pamwe nedhipatimendi rezvehutano reguta. Zvakare, vatsvaguriri vakaita ongororo yekudzivirira hutachiona pamwe nekubvunza- “Kwayedza kwechipiri kweIPC kwakaitiswa zvivakwa gumi nezviviri zvakapinda muchirongwa chechipiri uye zvaisanganisira kuongororwa kwemaitiro echikwata muchishandisa hurongwa hwepasi, kupihwa uye kushandiswa kwemidziyo yekuzvidzivirira, ruoko utsanana, kuronga kudzikisira, uye zvimwe zviitiko zveIPC. ”
Dhipatimendi rezvehutano remunharaunda rakabatsira mukuunganidzwa kweruzivo pane zvakanaka mhedzisiro, chimiro chechiratidzo, zvipatara, uye kufa. Pakupedzisira, vaongorori vakaona kuti kubva munaKurume 7 kusvika Chivabvu 8, 44% yeva2,773 Detroit SNF vagari vakawanikwa vaine tariro kuSARS-CoV-2 / COVID-19. Zera repakati revaya vane tariro vagari yaive makore makumi manomwe nemaviri uye 37% vakapedzisira vachida kurapwa. Nehurombo, 24% yeavo vakaedzwa vaine hutachiona, vakafa. Vanyori vakacherekedza kuti "Pakati pevarwere 566 ve COVID-19 vakataura zviratidzo, 227 (40%) vakafa mukati memazuva makumi maviri nemaviri ekuyedzwa, zvichienzaniswa ne25 (5%) pakati pevarwere mazana mana negumi nevasere vasina kuzviratidza; 35 (19%) kufa kwakaitika pakati pevarwere zana nemakumi masere vasina kuziva chimiro chechiratidzo. ”
Pakati pezvivakwa gumi nezviviri zvakapinda muchikamu chechipiri chekuwongorora, zvisere zvakamisikidza cohorting yevarwere vakanaka munzvimbo dzakatsaurirwa pasati paitwa ongororo. Zvivakwa zvizhinji zvakaverengerwa varwere vangangoita makumi masere uye zveavo vakaedzwa panguva yechipiri ongororo, 18% yakave nemhedzisiro uye yakanga isingazivikanwe kuva yakanaka. Seizvo vanyori vanocherekedza, chidzidzo ichi chinonongedzera kukuvadzwa kwehuwandu hwevarwere uye nepamusoro yekurwisa mwero Pakati peavo 26 SNFs, pakanga paine huwandu hwekurwiswa kwe44% uye chiyero chekuchipatara chakanangana neCOVID-19 ye37%. Idzi nhamba dzinovhundutsa uye dzinonongedzera kuchinodikanwa chinodiwa chekutsvaga kwekutanga, kudzivirira hutachiwana, kubatana, uye kubatana pamwe nemapazi ehutano eruzhinji. Pane chishuwo chakasimba chekupa maSNF nezvimwe zviwanikwa, kwete chete maererano nemidziyo yekuzvidzivirira, asiwo yakakosha hutachiona hwekudzivirira zviwanikwa uye vashandi. Sezvo idzi dziri nharaunda dzakapoteredzwa, rutsigiro rwunopfuurira rwuchadikanwa kwete kwete chete nguva yenguva yedenda asi kunyangwe mumashure.